Huawei anotanga kuyedza beta vhezheni yeHarmonyOS 2.0 | Linux Vakapindwa muropa
Huawei anotanga kuyedza beta vhezheni yeHarmonyOS 2.0
Mushure mekunge hutungamiriri hwaTrump hwazivisa kuti yaisanganisira Huawei pane yakasarudzika mazita uye mwedzi yakati wandei yekufungidzira uye izvo zvaigona kuitwa nekambani kuti ienderere mberi mumusika wema smartphones nemapiritsi, HarmonyOS yakavhurwa, inoshanda system iyo "Huawei yanga ichishanda" kwemwedzi kuitira kuti vasiye kutsamira paAndroid pamakomputa avo.
Uye zvakanaka, ikozvino iyo beta vhezheni yeHarmonyOS 2.0 inoshanda sisitimu yaburitswa uye beta iyi inogona kuyedzwa pane inotevera Huawei michina, «Huawei P40, P40 Pro, Mate30 uye Mate30 Pro, pamwe ne MatePad Pro piritsi ». Iyo yekushandisa interface inoenderana neEMUI 11, iyo inoshandiswawo muHuawei zvishandiso zvichibva papuratifomu yeApple.
Ngatiyeukei kuti chirongwa Harmony yave iri mukuvandudzika kubvira 2017 uye iri microkernel inoshanda sisitimu. Zvirongwa zvePurojekiti zvinoburitswa pasi pezenisi reBSD sechikamu cheiyo chirongwa cheOpenHarmony, chinotarisirwa nesangano risiri purofiti China Open Atomic Open Source Foundation.
Iyo HarmonyOS 2.0 Nhare mbozha Inogadzira Beta yakavandudza zvinhu zvinotevera:
Zvinopfuura 15000 APIs (kutsigira kusimudzira kwekushandisa kwefoni mbozha / maPAD, makuru masikirini, zvigadzirwa zvemaoko, mota uye michina)
• Yakagoverwa sisitimu yekushandisa
• Yakagoverwa mushandisi interface inodzora
Pazvinhu zveHarmonyOS zvinomira pachena, zvinotevera zvinotaurwa:
Iko musimboti weiyo sisitimu inosimbiswa padanho repfungwa / masvomhu danho kudzikisira njodzi yekukuvara. Iko kuongorora kwakaitwa pachishandiswa nzira dzinowanzo shandiswa mukukanganisa sisitimu kuvandudza munzvimbo dzakaita sendege uye astronautics, uye inogona kuwana EAL 5+ chengetedzo nhanho kutevedzera.
Iyo micronucleus yakasarudzika kubva kune ekunze zvigadzirwa, nepo sisitimu yacho ichibviswa kubva pahardware uye ichibvumira vanogadzira kuti vagadzire zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa pazvikamu zvakasiyana zvemidziyo pasina kugadzira mapakeji akapatsanurwa.
Iyo microkernel inongoshandisa iyo scheduler uye IPC, uye zvese zvimwe zvinoendeswa kumasevhisi masevhisi, mazhinji acho anomhanya munzvimbo yemushandisi, pamwe neinopenicha latency injini, inoongorora mutoro munguva chaiyo uye inoshandisa nzira kufanofungidzira maitiro ekushandisa, inokurudzirwa semurongi webasa. Zvichienzaniswa nemamwe masisitimu, murongi anowana 25,7% kudzikira mu latency uye kuderedzwa kwe55,6% mu latency jitter.
Ukuwo, kupa kutaurirana pakati pe microkernel uye iyo yekunze kernel services, senge iyo faira system, network sitaki, madhiraivha, uye kunyorera mashandiro epasi, IPC inoshandiswa, iyo, sekureva kwekambani, inokurumidza nekashanu pane IPC paZircon uye katatu nekukurumidza kupfuura IPC paQNX.
Panzvimbo yeiyo protocol stack ina-rukoko inowanzo shandiswa kudzikisira kuwandisa, Harmony OS inoshandisa yakareruka imwechete layer modhi zvichibva pabhazi rakagoverwa rinotaurirana nehurdware senge zvinoratidzwa, makamera, makadhi enzwi, nezvimwe zvakadaro.
Iyo sisitimu haina kupa mushandisi kuwana padanho remidzi (Iko hakuna wenguva dzose superuser wepasirese, asi kune yakasarudzika system maitiro.) Kuwana mashandiro akanaka, kusarudza kupihwa kunoenderana nekwanisi kunoshandiswa zvine chekuita nema ID. Tsika maapplication anodawo akasiyana mvumo yekamera uye maikorofoni kuwana.
Kugadzira zvinoshandiswa zvemakirasi akasiyana emidziyo, senge materevhizheni, nhare dzakangwara, mawadhi akangwara, masisitimu emota ruzivo, nezvimwe, chimiro chepasirese chinopihwa yekuvandudza nzvimbo uye ma SDK ane nharaunda inosanganisirwa yekusimudzira. Iyo yekushandisa ichaisa otomatiki maficha ekushandisa akasiyana masikirini, zvinodzora, uye mushandisi nzira dzekudyidzana. Iyo inotaura zvakare kupa kuHarmony nemashandisirwo ekushandisa maturusi aripo eApple maapplication ane mashoma shanduko.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi beta vhezheni, iwe unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Iwo ekutanga mafoni akanangana neiyo nyowani yekushandisa system yakarongerwa kuti itenge kutengeswa muna Gumiguru 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei anotanga kuyedza beta vhezheni yeHarmonyOS 2.0
Gnome timu yakaratidza mugwagwa wekuvandudza muGnome 40